Su'aal: Tubada caadada?
Topic: Su'aal: Tubada caadada? (Read 476 times)
« on: May 07, 2012, 04:26:20 AM »
ASC salaan qali ah kadib , waxan rabaa hadey macquultahey jawaab waxan ku xanuunsadaa dhiiga cadada macnaha dhiga igama soobaxo sidada caadiga ah dhaqtar ayan utagey waxuuna idhahey waxaa kenaya dhibka gudniinka hadii aad wax dhalilaheed ama aad guursanlaheed wad fiicnaan laheed, marka waxan isleyahey anigu gudniinka mahan oo waxani waxay ka imanayan daaqilka macnaha gudaha marka maxaa keenikara soo bixid la aanta dhiiga???
Re: Su'aal: Tubada caadada?
« Reply #1 on: May 20, 2012, 12:32:22 AM »
Baaritaano ku saabsan waxa xanuunka keenayo ma lugu sameeyay, takhtar maku wiisiteeyay ama ma ku saaray kumbuyuutar lagu fiirinayo tubooyinka iyo riximka.Waa qasab takhtarka markuu ku siinayo talo sidaan oo kale ah waxbuu ku dhisay ee muxuu baaritaan ah ayuu kugu sameeyay?